Iqela lezokhenketho | Hongli
Inkampani yethu ayithathi ingqalelo kwimizamo yabasebenzi kuphela, kodwa kwimpilo yomzimba neyengqondo yabasebenzi. Umzekelo, inkampani yethu iya kulungiselela ukuhlangana kwezemidlalo ukuvumela abasebenzi ukuba basebenze. Kunyaka ophelileyo, bonke abasebenzi bathatha inxaxheba kwezemidlalo. Ngexesha lokudibana kwezemidlalo, sibeke iminyhadala yemidlalo. Ngaphandle kogqatso olu-4 * 50 lokukhuphisana, kukwabakho nemfazwe, umbaleki we-100m kunye nemibuzo yolwazi malunga nemidlalo.
Ngaphandle kwemidlalo yezemidlalo, inkampani yethu iya kulungiselela ukhenketho lweqela. Kunyaka ophelileyo, siye eZHOUSHAN kunye. Kwiqela lethu, bekukho abasebenzi abangama-26 abathatha inxaxheba kukhenketho. Kuqala, sakhwela ibhasi ukuya zhoushan. Kwathabatha malunga neeyure ezine ukufika apho. Malunga nentsimbi ye-1, sathatha isidlo sasemini. Emva kwesidlo sasemini, saqala ukukhwela intaba kwaye sityelele imbonakalo. Emva kweeyure ezimbini, safika encotsheni yentaba. Kwaye emva koko, sathatha iifoto. Ukuphumla malunga nesiqingatha seyure, sibuyele umva.
Emva koko, siye kwindawo entle yeWu Shi Tang. Kule ndawo, sabona ii-cobblestones ezininzi ezimnyama nezikhanyayo. Kwaye sathatha isikhephe ukutyelela ichibi.
Ngobusuku, sasinexesha lokwenza imisebenzi yasimahla. Siye elwandle sasidlala imidlalo. Nangona kunjalo, abantu abaliqela bakhethe ukutyelela imarike yasebusuku. Ke bona abasebenzi abaya elwandle, badlala isanti, bazama ukubamba itreyini.
Ngemini elandelayo, saya ePutuo ntaba. Ndwendwela ilitye elimele njengeli litye njengentliziyo. Esona sigameko sibalulekileyo yitempile kunye noo bamboo grove.
Emva kokundwendwela, sibuyele e-Hangzhou. Luhambo olukhulu olu.
Ixesha lokuposa: Jun-18-2020